Iindaba -Iingongoma ezine zokuqwalaselwa kulungiso oluphezulu kunye nokugcinwa kwebhola ye-groove enzulu
Okokuqala, gcina i-bearing kunye nemo esingqongileyo icocekile
Akukho mfuneko yokuba ndikuxelele okwenzekayo. Nokuba uthuli olungabonakaliyo lungena kwi-HGF, luya kunxiba. Ukuyibeka ngokungathandabuzekiyo, awunakuthambisa isanti emehlweni akho, okuyinyani leyo!
Okwesibini, ukusetyenziswa kofakelo kufuneka kube ngononophelo kunye nokufakwa ngokuchanekileyo
Asisayi kuba nengqondo encinci, ukuba akunjalo, emva koko musa ukwenza iibheringi zebhola ezinzulu, uye ekhaya uyokudlala, eyona nto ibalulekileyo ayikukuvumela ukunyathela okuqinileyo, akuvumelekanga ukubetha ngqo ngesando, awoyiki ukwaphuka, wophuke i-deformation, ukuba wenze njani, uthwale ilahleko yazo, ha ha, kwaye akuvumelekanga ukudlulisa uxinzelelo emzimbeni.
Okwesithathu, sebenzisa izixhobo zokufaka ezifanelekileyo nezichanekileyo
Zama ukusebenzisa izixhobo ezizodwa kwaye uzame ukunqanda ukusebenzisa amalaphu kunye nefayibha yokutya.
Okwesine, ukuthintela umhlwa ophetheyo, ungasebenzisi i-blisters
Ukuthwala iQyzc kwenziwa ngentsimbi entle, kodwa kukoyika amanzi. Ukuba awuyikholelwa, yithi nkxu emanzini, ha ha, xa uthatha ngesandla, kuya kufuneka uhlambe ngokupheleleyo ukubila ezandleni zakho, kwaye uyinxibe ngeoyile yodidi oluphezulu ngaphambi kokusebenza. Ngexesha leemvula nehlobo, nikela ingqalelo ekhethekileyo kuthintelo lomhlwa. Sukundixelela ukuba woyike umhlwa. Kulungile, zizame ngokwakho kwaye ubone ukuba ziya kuba yintoni iziphumo zerusi!
Kuyasebenza ukuphanda igrisi kunye neoyile yokusetyenziswa ukuze uqonde imeko yokusebenza kwe-qyzc. Ewe kunjalo, ukuvuza, ukujika kombala kunye nokudodobala kwegrisi okanye ioyile kunokugwetywa kubumanzi, ukungcola, umgubo wentsimbi, njl.
Kuqwalaselwa ukuba kukho ukuvuza okuthambisa kunye nemicimbi yamanye amazwe enje ngomgubo wentsimbi kunye nomgubo wentsimbi oxutywe kuyo, isixa sokuvuza, ubushushu kunye nokushukuma kwebhola ye-groove ebanzi iya kujongwa rhoqo. Ukuba kukho nakuphi na ukungaqheleki, ulondolozo lwakwangoko luya kwenziwa.